Dagaal ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo maleeshiyo daacad u ah wasiirka amniga Jubbaland ku dhexmaray Beled Xaawo - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaDagaal ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo maleeshiyo daacad u ah wasiirka amniga Jubbaland ku dhexmaray Beled Xaawo
March 3, 2020 Puntland Mirror Somalia 0
Askar katirsan ciidanka dowladda oo dagaal ku jira. [Sawir Hore]
Beled-xaawo-(Puntland Mirror) Dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo maleeshiyo daacad u ah wasiirka amniga baxsadka ah ayaa ka dhacay meel u dhow xadka Kenya.
Dagaalka ayaa bilowday markii maleeshiyaad daacad u ah Cabdirashiid Janan, wasiirka amniga Jubbaland oo dhawaan ka baxsaday xabsi kuyaala Muqdisho, ay soo weerareen ciidamada dowladda oo ku sugan magaalada Beled Xaawo, sida ay sheegeen ilo-wareedyo deegaankaas jooga.
Labada dhinac ayaa madaafiic isku adeegsaday, kaasoo burburiyay hanti badan ayna dadka deegaanku ka carareen magaalada, goobjooge ku sugan halkaas ayaa u xaqiijiyay warbaahinta caalamiga ah ee Bloomberg.
Janan ayaa la xiray bishii Agoosto 2019 iyadoo lagu eedeeyay dambiyo aadanaha ka dhan ah, balse waxa uu xabsiga ka baxsaday bishii Janaayo.
Dagaalka ayaa imaanaya iyadoo uu meel adag marayo khilaafka u dhaxeeya Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Jubbaland.
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa kala diray golihii deegaanka magaalada Gaalkacyo, sida lagu sheegay digreeto kasoo baxday xafiiska madaxtooyada maanta oo Sabti ah. Digreetada ayaa lagu sheegay in golaha deegaanka ay hanan-waayeen [...]